ရိုးရှင်းပေမယ့် အစွမ်းထက်တဲ့ စီးပွားရေးအကြံပေးချက်လေးတစ်ခု | မာသင်
ရိုးရှင်းပေမယ့် အစွမ်းထက်တဲ့ စီးပွားရေးအကြံပေးချက်လေးတစ်ခု
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတိုင်းမှာ ….
“ဘာကို” ရောင်းသလဲ ဆိုတာထက် ” ဘယ်လို” ရောင်းသလဲ ဆိုတာ ပိုအရေးကြီးတယ် ။
“ဘာကို” ပေးသလဲ ဆိုတာထက် “ဘယ်လို” ပေးသလဲ ဆိုတာ ပိုအရေးကြီးတယ် ။
“ဘာကို” လုပ်သလဲ ဆိုတာထက် “ဘယ်လို” လုပ်သလဲ ဆိုတာပိုအရေးကြီးတယ်။
“ဘာကို” ခင်းကျင်းပြသထားလဲ ဆိုတာထက် “ဘယ်လို” ပြသထားလဲဆိုတာပိုအရေးကြီးတယ်။
“ဘာကို” ဆိုတာကိုပြိုင်ဘက်တွေက လိုက်တုလုပ်နိုင်ပေမယ့်
“ဘယ်လို” ဆိုတာ ကိုယ့်ဟန်ကိုယ့်ပန် နဲ့ကိုယ်။
ကျော်ဟိန်းလိုလိုက်တု သရုပ်ဆောင်နိုင်ပေမယ့် ကျော်ဟိန်းဖြစ်မလာဘူး။
Amazon လို လိုက်လုပ်နိုင်ပေမယ့် Amazon ဖြစ်မလာဘူး။
Walmart လို လိုက်လုပ်နိုင်ပေမယ့် Walmart ဖြစ်မလာဘူး။
“ဘာကို” ဆိုတာထက် “ဘယ်လို” ဆိုတာ ကို စဉ်းစားပါ။
ဘယ်သူမှ မယှဉ်နိုင်တဲ့ ….
အများနဲ့မတူ တစ်မူထူးခြားတဲ့ ….
ဘယ်သူဘာလုပ်လုပ်၊ ကိုယ်က ဘယ်လို လုပ်ပါ။